FIFA 16 Soccer 2.1.108792.4 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.1.108792.4 လြန္ခဲ့ေသာ3ႏွစ္က
ဂိမ္းမ်ား အားကစား ဂိမ္းမ်ား FIFA 16 Soccer
FIFA 16 Soccer ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
မိုဘိုင်းအပေါ်တစ်ဦးအသစ်များ, ပိုကောင်းနှင့်ပိုမြန်ဖီဖာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူလှပသော Play! ဖီဖာ 16 Ultimate Team သို့သင်တိုင်းကြောက်မက်ဘွယ်တိုက်ခိုက်မှု, လက်သည်း-ကိုက်ရည်မှန်းချက်နှင့်ဘယ်တော့မှမပြုမီ console ကိုကဲ့သို့ဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူတူသောအင်အားကြီးအနိုင်ရအောင်ပွဲခံပေးနိုင်ပါတယ်။ Google Play တွင်ဘောလုံးအင်္ဂါရပ်များဆုံးလက်တွေ့ကျကျ set ကိုခံစားရသည်။
** ဤသည်ထက်သာလွန်အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့အသေးစိတ်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏စက်ပစ္စည်းတွင်နေရာလွတ်အနည်းဆုံး 1.4GB ရှိသေချာအောင်ပေးပါ။ ဖီဖာ 16 Ultimate Team က Motorola ကို Nexus 6, HTC Nexus 9, HTC က M8 က, Asus က Nexus7ကို 2nd ဗိုလ်ချုပ်ကြီးက Samsung ၏ Galaxy S6, Samsung ရဲ့ Galaxy S6 အစွန်း, Samsung Galaxy S5 ကို, Samsung ရဲ့ Galaxy Alpha, Samsung Galaxy Note Edge, Sony Ericsson က Xperia Z2 အပေါ်အကောင်းဆုံးအလုပ်ဖြစ်တယ် tablet ကို, Sony Ericsson ကက Xperia Z3, Samsung ရဲ့ Galaxy S4 ကို, HTC Nexus 4, LG က G2 မှာ။ **
သငျသညျပွဲကစားအဖြစ်ပိုကောင်းကျွမ်းကျင်မှုရွေ့လျားပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ပိုမိုတုံ့ပြန်မှုထိန်းချုပ်မှု, မတ်အသင်းဖော်များနှင့်တိုးတက်လာသော animations တွေကိုအဘို့အဆင်သင့်ကိုရယူပါ။ Plus အားယခုသင်ဘောလုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဟနျအမူအရာသို့မဟုတ်ခလုတ်ကိုသုံးစေနှင့် Enhanced Hybrid ကိုထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အတူတစ်လိုလားသူများကဲ့သို့ကစားရန်ပင်လွယ်ကူစေရန်ဖြစ်ပါတယ်။ အမြတ်ပြီးတော့ငြိမ်ဝပ်နှင့်အတူလွန်ခဲ့သည့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုတ်ထောက်လှမ်းရေးတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်အတူလူကျွံဘောအသိပညာနှင့်ပိုပြီးတိုးတက်လာတယ်။ တနည်းအားဖြင့်အစေး၏ဘေးထွက်အပေါ်မန်နေဂျာရာထူးယူပြီး, ပွဲစဉ်တူအောင်ဖန်တီးရန်ရွေးချယ်ပါ။ ဒါ့အပြင်မိုဘိုင်းပေါ်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, သင်ဂိုးသွင်းပြီးနောက်အစေးအပေါ်ထူးခြားတဲ့ကစားသမားအထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပဖြစ်ပေါ်နိုငျသညျ!
သင့် Ultimate တွင် TEAM တည်ဆောက်ရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲ
, ဝင်ငွေကုန်သွယ်ရေး, နှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးယဉ်အသင်းကိုဖန်တီးရန် Lionel Messi, ယော်ဒန်မြစ် Henderson နှင့် Juan Cuadrado တူစူပါစတားလွှဲပြောင်း။ သင့်ရဲ့ကစားစတိုင်, ဖွဲ့စည်းခြင်း, ပစ္စည်းများနှင့်ထို့ထက် ပို. ရှေးခယျြပါ, ထို့နောက်အင်အားအကောင်းဆုံးကစားသမားရေးစပ်သီများအတွက်ကစားသမားဓာတုဗေဒဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေး။
Challenger လမျး GAMES
ဘယ်တော့မှရှေ့ကကဲ့သို့အစေးပေါ်တွင်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုချွတ်ပြသစေချင်သလား? သင့်ရဲ့နေ့စဉ်စိန်ခေါ်မှု - Choose, မြေပြင်သွားတာရိုက်ကူးနှင့်ကူး, ပြစ်ဒဏ်များနှင့်ထို့ထက် ပို. ဖို့ dribbling မှ။ ထိုအခါလက်ျာကစားသမားကောက်နှင့်ဆုလာဘ်ဝင်ငွေဖို့စိန်ခေါ်မှုရိုက်နှက်!
500 ကျော်လိုင်စင်သင်းမှ 10,000 ကျော်ကစားသမားတွေမှ Choose နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှစစ်မှန်သောနယ်ပယ်တွင်အမှန်တကယ်လိခ်မှအခြားကစားသမားဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ဖို့သွားပါ။ Dynamic ခြှနျနှင့်အတူလည်းလက်ရှိတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ-အဖြစ်အပျက်ဘောလုံးပွဲစဉ်မှစိန်ခေါ်မှုများထပ်ဖွ။
ယခုသင်တို့သည်နောက်တဖန် သာ. ကောင်း၏တစ်ခုခုဖော်ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတာဟာ၏အခွင့်အလမ်းများအတွက်လိုအပ်ကစားသမားများနှင့်ပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ဖောက်။ ပိုကောင်းသငျသညျကုန်သွယ်မှုမြင့်မားတန်ဖိုးကိုပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ကစားသမားတွေ, သင်ပြန်ရလိမ့်မယ်အအဆင့်မြှင့်!
လှပတဲ့ဂိမ်းကစားရန်အဆင်သင့်, နေရာတိုင်းမှာသင်ရှိပါသလဲ ယခုဖီဖာ 16 Ultimate Team သို့ရယူပါ!
အရေးကြီးစားသုံးသူပြန်ကြားရေး: ဒီ app ဟာနာတာရှည်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု (network ကိုအခကြေးငွေလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်) လိုအပ်သည်။ EA ရဲ့ Privacy & Cookie ပေါ်လစီများနှင့်အသုံးပြုသူသဘောတူညီချက်၏လက်ခံမှုလိုအပ်သည်။
။ (အသေးစိတျအဘို့အသီးသန့်လုံခြုံရေး & Cookie ပေါ်လစီကြည့်ပါ) တတိယပါတီ analytics နည်းပညာကိုတဆင့် data တွေကိုစုဆောင်း။ 13 ကျော်တစ်ဦးပရိသတ်အတွက်ရည်ရွယ်သည်အင်တာနက်နှင့်လူမှုကွန်ရက်မှတိုက်ရိုက်လင့်ခ်များပါရှိသည်။
အကူအညီများသို့မဟုတ်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအဘို့အ https://help.ea.com သွားရောက်လည်ပတ်။
30 ရက် '' အသိပေးစာ www.ea.com/1/service-updates အပေါ် posted ပြီးနောက် EA ၏အွန်လိုင်း features နဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုအနားယူစေခြင်းငှါ
FIFA 16 Soccer အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
FIFA 16 Soccer အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
FIFA 16 Soccer အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
herzogstehrglw စတိုး 2k 962.09k
FIFA 16 Soccer ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း FIFA 16 Soccer အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.1.108792.4
လက်မှတ် SHA1: 38:B0:60:04:0B:0B:3D:C9:FE:0D:16:02:FA:69:80:2E:05:75:D5:28
FIFA 16 Soccer APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ